दिनेशजी तपाईंको चेतावनीशैलिको सुझाब तपाईंकैलागी घातक हुन सक्छ !::Nepal's No.1 Genuine Online News Portal
प्रकाशित मिति - मङ्ल, असार १, २०७५
जनचेतनाको बिकास गर्न पत्रकारिताको महत्त्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा घटेका हरेक घटना खबर समाचारलाई जनताको पहुँचसम्म पुर्याउन पत्रकारहरुको ठुलो योगदान हुन्छ । सधै सत्यतथ्य खोतलेर बाहिर समाजलाइ सुसुचित गराउनु पत्रकारको पेसागत धर्म हो । आफ्नो पेसागत धर्म र पेसाप्रतिको निष्ठाबाट पत्रकार बिचलित हुनुहुदैन ।
हाम्रो देशमा नागरिक पत्रकारिता गर्ने खोजी पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरु सायद औलामा गन्न सकिने मात्रै होलान, जनताकालागि निस्वार्थ भावनाले खोजमुलक पत्रकारिता गर्ने कसैको डर त्रास धम्किबाट नडग्मगाइ आफ्नो पेशाप्रती बफादार रहने पत्रकारको कुरा गर्नु पर्दा रबि लामिछानेकोको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । एक असल र निडर पत्रकारको नाम लिनुपर्दा छुटाउनै नहुने नाम हो रबि लामीछाने ।
उहाँ खोजमुलक पत्रकारिता गर्नु नागरिक पत्रकारिता गर्नुहुन्छ । नागरिकलाई सत्यतथ्य सुचनाले सुसूचित गराएर नागरिकमा जन चेतनाको बिकास गर्न पत्रकार रबि लामिछानेले जुन ढंगले पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, म पंतिकार उहाँको प्रयासको ठूलो प्रशंसक हो ।
नागरिक पत्रकारिता गरेकै कारणले उहाँ प्रत्येक नेपालीको मन मुटुमा बस्नु भएको छ । बिगत केही बर्ष अगाडिसम्म रबि लामिछाने को हुन् भन्ने दुनियाँ बेखर थियो । अहिले लाखौ पाठकहरुले उहाँको नाम श्रद्धाकासाथ लिने गर्छन् । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका सेलिब्रेटी पत्रकार हुन् रबि लामिछाने भन्दा फरक नपर्ला ।
नेपाली चलचित्र जगतका ख्यातिप्राप्त निर्देशक, निर्माता तथा कलाकार दिनेश डिसिको एउटा भिडियो अहिले भाइरल भएको छ । भिडियो भाइरल हुनुको एउटै कारण हो उहाँले पत्रकार रबि लामिछानेलाइ चेतावनीको भाषामा सुझाव दिनु । भिडियोमा निर्माता तथा निर्देशक दिनेश डिसिले पत्रकार रबि लामिछानेलाई पुलिस तथा वकिल नबन्न चेतावनीको सुझाव दिएका छन् । उहाँले त्यो शब्द मनैबाट भन्नू भएको हो वा केही उट्पट्याङ बोलेर भाइरल हुनलाइ हो त्यो उहाँले नै जानुन्। त्यो भनाइ उहाँको जुन नियतकासाथ आएको भए पनि त्यो आपत्तिजनक छ ।
एउटा पत्रकार जस्ले जनताकोलागी पत्रकारिता गर्न सबै सुखसयल छाडेर आए जस्ले नेपाली पत्रकारिता जगतप्रती नागरिकको विश्वास र भरोसा बढाए, जो निस्वार्थ मनले निडरताकासाथ खोजी पत्रकारिता गर्छन् त्यो आदर्श ब्यत्तिप्रती लक्षित दिनेश डिसिको चेतावनी जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ ।
पत्रकार रबि लामिछानेलाई वकिल पुलिस नबन्न चेतावनी दिने दिनेश डिसिलाइ यो पंत्तिकारको सुझाव ! तपाईं चलचित्र निर्देशक, चलचित्र सिनेमाको बारेमा कुरा गर्नुहोस् । नेपाली चलचित्र जगतका समस्या बेथितिको बारेमा कुरा गर्नुहोस् । ती समस्याका समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर सोच्नुहोस्, देश र जनताप्रती बफादार पत्रकारलाई तपाईंको चेतावनीशैलिको सुझाब तपाईंकैलागी घातक हुन सक्छ । बोल्ने अधिकार छ भन्दैमा जे मनमा आयो त्यै बोल्ने अधिकार तपाईंलाई छैन । पत्रकार रबि लामिछाने नेपाली जनताका ढुकढुकि हुन् नेपाली जनताका आस्था र भरोसा हुन् । नेपाली जनताको आस्था भरोसा ढुकढुकिमाथी भुलेर पनि प्रहार नगर्न यो पंतिकारको तपाईं दिनेश डिसिलाइ सुझाव छ..
के भनेका थिए दिनेशले यो पनि हेर्नुहोस